Sida loola wadaago fayl iCloud Drive-ka ku jira iOS 13 ama iPadOS | Wararka IPhone
Codsiga Archives waxay samaysay boodboodi muhiim ah ee macruufka 13. Tan ugu muhiimsan waxay la xiriirtaa isku xirnaanta Kaararka SD iyo USB flash drives Si loo wadaago macluumaadka u dhexeeya qalabkeena iyo barnaamijyada ku rakiban. Isbedelka jihada ee iPad-ka uu ku dhacay mahadcelinta iPadOS ayaa ah mid ka mid ah isbadalada ugu waa weyn ee uu iPad ku dhacay tan iyo markii la bilaabay macruufka. Laakiin sidoo kale, macruufka 13 wuu oggol yahay wadaag faylasha dhan iCloud Drive iyo faylasha barnaamijka laftiisa. Waxaa jira fursado badan oo la wadaago oo aan falanqeyno ka dib boodboodka.
La wadaag faylasha dadka ka socda iCloud Drive iyo iOS 13 ama iPadOS
Faylal aad u horumarsan oo App ah. Fur, maamul oo abaabulo dukumiintiyada ku kaydsan xusuusta dibedda ama server-ka barnaamijka faylasha laftiisa.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa furitaanka barnaamijka Archives mid ka mid ah qalabkeena leh iOS 13 ama iPadOS. Guji dhanka bidix ee kore "Goobaha" oo xulo iCloud Drive. Tan waxaan ku geli doonaa dariiqa kaydinta ee iCloud lafteeda. Waxaa muhiim ah in la ogaado in kaliya aan la wadaagi karno fayl aan iskeen u sameysanay oo aanan la wadaagi karin fayl lagu sameeyay codsiyo sida VLC, dhamaan Apple iWork suite ama PDFReader, kiiskeyga.
Marka aan gudaha galno, waxaan riixnaa oo aan haynaa astaanta galka aan dooneyno in aan wadaagno ka dib markii aan riixno ilbiriqsiyo yar ayaan sii deynaa si aan u furno liiska waxqabadka degdegga ah. Waxaan heli doonaa ikhtiyaarka aan ku nuqulan karno, ku nuqulan karno, ku dhaqaaqi karno, ku tirtiri karno, ku heli karno macluumaad, ku calaamadeyn karno galka, dib ugu magac bixin karno, ugu calaamadeyn karno waxyaabaha ugu cadcad, ku cadaadin karno, ku hagaajin karno shaashadda iyo waxa aadka noo xiiseeya wadaag.
Markaan riixno inaan wadaagno menu cusub ayaa ka furmaya kaas oo xagga sare aan ku aragno magaca galka (waxaan dooran karnaa dhowr fayl oo aan ku fulin karnaa isla nidaamka hore loo sharaxay). Kaliya hoosta waxaan fursad u leenahay inaan si toos ah ugula wadaagno AirDrop iyo codsiyada kale ee ku habboon kordhinta. Qeybta hoose waxaan ka helaynaa Kudar Dadka, shaqada ugu xiisaha badan. Markii aan riixno, waxaan nuqulan karnaa xiriir aan u diri doonno dadka aan dooneyno inaan u dirno galkaas laakiin isku xirkaasi wuxuu yeelan doonaa mudnaanta in qaabkii hore ee wax loo qaybsanayay aanu lahayn. Haddii aan riixno halka ay ku qoran tahay «Ikhtiyaarrada in lala wadaago» menu kale ayaa lagu soo bandhigayaa halka aan ku aragno:
Ayaa marin u leh: haddii kaliya dadka aan martiqaadno, ama qof kasta oo leh xiriiriyaha
Iga raali noqo: dadkaasi waxay sameyn karaan isbadal ama waxay aqrin karaan waxa ku jira galka
Waxaan si fudud u nuqulan doonnaa iskuxirka ay soo bandhigtay barnaamijka Faylasha oo aan la wadaagi doonno dhammaan asxaabteena. Hawshani ficil ahaan waa isku mid marka la eego hawlgalka sida habka loo wadaago feylasha dhammaan Google Docs Suite.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo wadaago fayl ka socda iCloud Drive-ka iOS 13 ama iPadOS
Apple waxay dooneysaa inay ka iibsato qaybta 5G modem shirkadda Intel